Tanora ny ankamaroan’ireo voaresaka tany aloha. ‘Nahatsiaro an’ilay Mpamorona Be Voninahitra nanao azy izy ireo tamin’ny andro fahatanorany.’ (Mpito. 12:1) Misy mpisava lalana 3 197 eto Géorgie, ary 25 taona na latsaka ny ampahatelony. Nahoana no be dia be toy izany ny tanora mandroso?
Maro ny antony mety ho nahatonga izany. Mifankahazo am-po, ohatra, ny fianakaviana eto Géorgie. Hoy i Konstantine, nitaiza zaza dimy tao amin’ny fahamarinana: “Liana tamin’ny fahamarinana aho satria tsapako hoe Ray be fitiavana i Jehovah. Rehefa nanan-janaka aho, dia nataoko izay hahatonga azy ireo tsy hisalasala hiresaka amiko.”
Manan-janaka telo ry Malkhazi mivady. Miezaka mifandray tsara izy mianakavy. Hoy i Malkhazi: “Matetika no anontanianay ny zanakay hoe inona no toetra tiany aminay mivady sy amin’ny mpiray tam-po aminy. Dia asainay manome ny valin-teniny izy ireo amin’ny fotoam-pivavahan’ny fianakaviana. Lasa mahita ny toetra tsaran’ny hafa izy ireo, ary mankasitraka an’ilay izy.”
“Tena mahafa-po ahy izao ny fiainako!”
Manampy ny ray aman-dreny hampiofana ny zanany koa ny anti-panahy. Miezaka izy ireo mba hanome andraikitra ny tanora eo anivon’ny fiangonana raha vao vita batisa izy. Hoy i Nestori, izay vita batisa tamin’izy 11 taona: “Mbola kely aho dia efa nomen’ireo anti-panahy andraikitra madinidinika. Nanampy ahy hahatsapa izany hoe tena anisan’ny fiangonana aho.”
Mandray soa koa ny tanora, rehefa manome modely ho azy ireo ny Kristianina hafa ary manohana azy ny anti-panahy. Hoy i Koba, rahalahin’i Nestori: “Nadiditra aho tamin’ny mbola kely fa tsy hoatran’ny mpiray tam-po amiko. Nanome modely ho ahy anefa ny anti-panahy tanora iray. Niezaka foana koa izy mba hahatakatra ny nahazo ahy sady tsy nitsaratsara ahy. Anisan’ny tena nanampy ahy hiverina tamin’i Jehovah izy.”
Manitatra faritany any amin’ny toerana mitokana izao i Nestori sy Koba ary Mari anabavin’izy ireo. Hoy i Koba: “Tena mahafa-po ahy izao ny fiainako!”
“Mandeha foana ao amin’ny fahamarinana ny zanako”
Miezaka be ny biraon’ny sampana mba hanohana ny ezaka ataon’ny ray aman-dreny. Asainy handray anjara amin’ny tetikasan’ny fandaminana àry ny tanora kristianina. Hoy ny rahalahy iray anisan’ny Komitin’ny Sampana: “Tena tianay ny tanora, dia tohananay ry zareo rehefa miezaka manatratra tanjona ara-panahy.”
Vavolombelona avy eto Géorgie manorina Efitrano Fivoriambe eto Tbilissi, miaraka amin’ny mpanompo iraisam-pirenena
Misy vokany tsara amin’ny tanora ny miara-miasa sy mifandray akaiky amin’ny mpiara-manompo matotra. Hoy i Mamuka, izay niara-niasa tamin’ny mpanompo iraisam-pirenena rehefa nanorina Efitrano Fivoriambe teto Tbilissi: “Lasa nahazo traikefa aho rehefa niara-niasa tamin’ny mpiara-manompo avy any an-tany hafa. Niana-javatra be koa aho teo amin’ny lafiny ara-panahy.”
Mandroso tsara ny tanora maro eto Géorgie satria mifandray tsara amin’ny fianakaviany, ampian’ireo anti-panahy, ary manahaka ny modely omen’ny Kristianina hafa. Mahatsapa toa an’ny apostoly Jaona ny ray aman-drenin’izy ireo hoe: “Tsy misy mahavelom-pisaorana ahy mihoatra noho izao, dia ny andrenesako fa mandeha foana ao amin’ny fahamarinana ny zanako.”—3 Jaona 4.
Nampitomboina ny asa fandikan-teny
Nasain’ny Filan-kevi-pitantanana nohadihadin’ny sampana rehetra, tamin’ny 2013, raha mila adika amin’ny fiteny hafa ampiasaina ao amin’ny faritany iandraiketan’izy ireo ny boky sy gazety. Olona maro kokoa amin’izay no afaka mandre ny vaovao tsara.
Nanapa-kevitra àry ny sampan’i Géorgie hoe hadika amin’ny teny svane sy mingrélien ny boky sasany. Mitovy be amin’ny teny géorgien ireo fiteny ireo, ka heverin’ny olona sasany hoe fitenim-paritra.
Hoy ny mpisava lalana be zotom-po avy ao Svanétie: “Tena tia zavatra ara-panahy ny mponina eto sady manaja Baiboly. Tsy te handray ny bokintsika ny olona sasany amin’ny voalohany. Rehefa hitany anefa hoe misy amin’ny fiteniny ilay izy dia raisiny.”
Nihetsi-po be ireo mpitory miteny mingrélien rehefa natao voalohany tamin’ny fiteniny ny fivoriana. Hoy i Giga, mpisava lalana tanora: “Afaka manome valin-teny amin’ny fomba fiteniko aho izao, fa tsy voatery mandika an’ilay izy ao an-tsaiko intsony vao mamaly.”
Hoy i Zuri, anti-panahy ao amin’ny fiangonana miteny mingrélien ao Tkaia: “Nifamahofaho ny soa sy ny ratsy teo amin’ny fiainako, saingy tsy nisy nampitomany ahy ireny. Tamin’ny vao natao tao am-pivoriana anefa ny hiran’ilay Fanjakana tamin’ny teny mingrélien, dia nitomany daholo ny mpanatrika, anisan’izany aho.”
Zava-bita niavaka tato ho ato
Daty manan-tantara ho an’ny Vavolombelona eto Géorgie ny asabotsy 6 Aprily 2013. Notokanana tamin’io mantsy ny tranon’ny sampana nohavaozina sy nitarina, ny Efitrano Fivoriambe iray, ary ny trano vaovao hanaovana sekoly ara-baiboly. I David Splane, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana no nanao ny lahateny fitokanana. Vavolombelona maro no nampiantrano sy nandray tsara an’ireo vahiny 338 avy any amin’ny tany 24.
Nanao lahateny manokana ny Rahalahy Splane ny alahady, ary nisy 15 200 ny mpanatrika eran’i Géorgie. Nalefa mivantana tany amin’ireo toeram-pivoriana tamin’ny alalan’ny video mantsy ilay fandaharana. Iny no fivoriana be mpanatrika indrindra nataon’ny Vavolombelona teto. Tena nampihetsi-po ny nahita an’ireo rahalahy sy anabavy faly sy nifampahery. Hoy ny rahalahy tanora iray: “Izao vao azoko hoe hoatran’ny ahoana izany tontolo vaovao izany.”
Fitokanana sampana teto Tbilissi, 2013
Fitahiana ho an’ny vahoakan’i Jehovah eto Géorgie ny Sekoly Ara-baiboly ho An’ny Mpivady Kristianina (Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana ankehitriny). Efa 200 mahery no nahazo diplaoma tamin’izy io, nanomboka tamin’ny 2013. Tena ankasitrahan’ireo mpianatra ny fampianarana azony, ka vonona hanompo any amin’izay toerana ilana mpitory izy ireo.
“Mikely aina hanatratra ny eo aloha”
Torina eran’i Géorgie izao ny vaovao tsara noho ny ezaka mafy nataon’ireo mpitory voalohandohany. Tia an’Andriamanitra sy ny namany izy ireo, be herim-po, nanam-pinoana, ary tia karokaroka ka tena notahin’i Jehovah.
Misy 18 000 mahery izao ny Vavolombelona eto. Faly izy ireo manohy ny asa nataon’ireo mpitory teo aloha, sady manampy ny mpiara-belona aminy hahatsapa hoe mahery ny Tenin’Andriamanitra.—Fil. 3:13; 4:13.
Komitin’ny Sampan’i Géorgie: Wayne Tomchuk, Levani Kopaliani, Joni Shalamberidze, ary Michael Jones